पति पत्नीले एकसाथ गर्नुपर्छ यी काम, फल आफै देख्नुहुनेछ ! – Sandesh Press
पति पत्नीले एकसाथ गर्नुपर्छ यी काम, फल आफै देख्नुहुनेछ !
November 21, 2020 297
एजेन्सी । पति पत्नीको मुख्य कर्तव्यमा एक हो सबै पुजाका कार्य दुबै मिलेर गर्ने । पति वा पत्नी एक्लैले पुजा अर्चना गर्दा त्यसको महत्व त्यती नहुने शास्त्रमा उल्लेख छ। शास्त्रका अनुसार पति पत्नी एक साथ पुजा आदीको कर्म गर्दा त्यसको पुण्य कयौँ जन्मसम्म प्राप्त हुने तथा पुरानो पाप समेत नास हुने गर्दछ।
हामी कति बुद्धिमान या समझदार छौँ भन्ने कुरा हामी आफैँ बताउन सक्दैनौ। समझदारी या हाम्रो बुद्धि कौशलको अनुमान तब मानिसलाई थाहा हुन्छ, जब हामी कुनै विपत्तिमा आफ्नो दिमागको सही प्रयोग गर्छौँ।
हुनतः हरेक महिलामा आ आफ्नो गुण हुन्छ तर आज हामी राशिको माध्यमले थाहा पाउने छौँ कि वास्तवमा कुन–कुन राशि भएका महिला अधिक चलाक र बुद्धिमान हुन्छन् ?
यदि यिनीहरूमा कुनै एकदमै महान विचार छ भने त्यसमा हृदय देखि नै काम गर्छन् र त्यसलाई सबैको सामु ल्याउन अधिक मेहेनत गर्छन् । यी राशि भएका महिलाहरु एक महान बुद्धिको स्वामी हुने गर्छन्।
Prevकोरोनाको खोप लगाएकी पुटिनकी छोरीको शरीरमा देखियो यस्तो परिवर्तन, विश्व नै दंग !
Nextमंसिर १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने हुदाँ यी ४ राशि हुदैछन् मालामाल !
कोभिड केन्द्रमा कोरोना संक्रमित जोडीले पीपीई लगाएर विवाह गरे बेहुलीको विवाहकै दिन कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि
फुल टिप्न खोज्दा गएको रहेछ पाइलटको ज्यान, घटना देख्ने प्रत्यक्षदर्शी यसो भन्छन् (भिडियोसहित)